China Factory Direct Supply Ball Joint-Z12069 ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebu ya | TANGRUI
Ahụ anyị nwere ọtụtụ nkwonkwo. Ihe nkwonkwo na-enyere anyị aka ịkwaga nke ọma ma na-agbanwe agbanwe, mmegharị a na-ebelata mmetụta ahụ. Ihe nkwonkwo bọọlụ dị ka nkwonkwo nkwanye ụgbọala. Jikọọ n'etiti akara na mkpịsị aka.
Gịnị kpatara bọl?
Iji chịkwaa ụgbọ ala ahụ, achọrọ na wiil ndị dị n'ihu nwere ike ịtụgharị na ntụziaka achọrọ. A na-eji usoro ị na-eji agagharị agagharị na wiil ndị ahụ, a na-ejikwa bọlbụ jikọọ cam rotary na menjuba. Ojiji nke nkwonkwo bọọlụ nke frets na-enye ohere ka nzukọ nzukọ ahụ na-atụgharị gburugburu axis ya ma n'otu oge ahụ inwe njikọ na-agbanwe agbanwe na ndị na-atụgharị, nke dị ezigbo mkpa maka ọrụ nke nkwụsịtụ.
Ọdịdị nke nkwonkwo bọọlụ.
Shell nke ihe nkwado bọọlụ nwere ụdị dị iche iche, mana usoro na ụkpụrụ nke ọrụ ha bụ otu. Ma mgbatị bọl nke elu na nke ala nwere: mkpịsị aka ya na eri (ma ọ bụ uzo) na nkwonkwo bọọlụ, ụlọ, polymer ipigide, ihe nchacha ihe mkpuchi na mkpuchi. Nakwa, ndị na-akwado ya bụ ụdị na-adaba adaba na nke anaghị ekewa. Na mbụ, mgbe mgbe, mmezi nke bọọlụ biarin e omume, ọ gụnyere dochie plastic mmewere. Nrụzi ndị dị otú ahụ weghachiri nkwado nke mbụ nke ngagharị. Ma, usoro mgbake a eweghachighị ntụkwasị obi mbụ nke usoro bọọlụ, n'ihi na a gbanwere ihe mmebe polymer, na mkpịsị aka aka ochie, na n'oge ọrụ nke mgbatị a, ọ nwere ike ịmalite microcracks nke nwere ike ibute mbibi nke ígwè ma mepụta ọnọdụ mberede n'okporo ụzọ. Bọọlụ bọlbụ nke oge a maka ụgbọ ala, a na-ejikarị ihe eji eme ihe eme ihe mgbe niile, na mgbe ọdịda, a ga-anọchi ha. Na ihe ị ga-azụta, bọl bọlbụ n'elu na nke ala na ihe ndozi na ọnụ ahịa ọnụ ahịa, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ụlọ ahịa akpaaka "Tangrui" ga-enyere gị aka, na ya enwere ọtụtụ ngwongwo akụkụ niile dị mkpa yana ngwaọrụ dị mma. Iji dochie bọl bọl na ụgbọala Lada na ihu, azụ ma ọ bụ ụkwụ igwe, ị ga-akpọtụrụ ndị ọkachamara, ebe ọrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ọchịchọ na ụfọdụ ngwaọrụ, ị nwere ike imezi mmezi niile n'onwe gị.
Site na ntinye nke nkwonkwo bọl, otu ihe mgbochi ụgbọala nwere ọtụtụ mmegharị. Ihe nkwonkwo bọọlụ na-arụ ọrụ ka akụkụ nkwusioru ahụ wee nwee ike ịkwaga n'akụkụ dị iche iche, ọ bụghị naanị na otu ụzọ. Omume a na-achụsasị mmetụta na ụgbọ ala.
■ Ọgwụgwọ Ọgwụ Dị Mkpa
Tangrui nwere eleTangruio deposition mkpuchi yiri nke OE larịị iji gbochie nchara na-ebelata anwụ ngwa ngwa.
Tangrui na-eji oche rọba. Obibi esemokwu na obere mgbanwe na torque na nwechapụ nwere ike ime ka arụmọrụ dị ogologo.
■ Ike siri ike & Soft Ball Stud
Tangrui na-ebelata ihu ala nke bọọlụ site na usoro ọkụ, na-eme ka bọl ahụ dị nro.
O nwekwara oke ike site na itinye ígwè nchara, ọgwụgwọ okpomọkụ, na ịkpụ oyi.
.Dị Bọọlụ nkwonkwo
OEM Mba 1603545 1603544
Nha OEM ọkọlọtọ
Ihe onwunwe --- Nkedo ígwè --- Cast-aluminium --- Nkedo ọla kọpa --- Iron ductile
Akara IHE OPEL
Akwụkwọ ikike 3afọ / 50,000km
Akwụkwọ IS016949 / IATF16949
Nke gara aga: TangRui Oem Ball Joint FOR OPEL-Z12068
Osote: Ogwe aka njikwa ihu ala maka BENZ-Z5130
Akọrọ Ball nkwonkwo
Taya Ball Joint
Track Rod Ball nkwonkwo
Auto mapụtara Parts Joint Ball Direction Machine D ...
Auto Parts Control Ogwe aka Ball Ball Joint N'ihi NISSAN-Z1 ...
Ogo Nkwa Mpụga Ball Joint-Z12054
China Factory Tụkwasịnụ Suspension Parts Ball Jikọọ ...
Factory N'ogbe Lower Suspension Ball nkwonkwo -...
Shock Absorber kpọchie, Hood Shock Absorber, Taya Ball Joint, N'iru n'iru Knuckle, Ogige Ulo, Shock Absorber Rubber,